Golaha Racfaanka ee Kiisaska Socdaalka Norway (UNE) - Utlendingsnemnda
Dette er UNE Klagesaksbehandling Interne retningslinjer Lover og forskrifter UNEs serviceerklæring Organisasjonskart Startsiden Om UNE UNE in other languages Golaha Racfaanka ee Kiisaska Socdaalka Norway (UNE)
Golaha Racfaanka ee Kiisaska Socdaalka Norway (UNE)
Utlendingsnemnda (UNE) waa gole racfaan oo madax bannaan oo qaab maxkamadeed u shaqeeya, wuxuuna wax ka qabtaa racfaanka laga qaato diidista ka timaadda Directorate of Immigration (UDI) (Waaxda Socdaalka - UDI) iyadoo la raacayo Sharciga Socdaalka iyo Sharciga Dhalashada Norway. UNE wuxuu maamul ahaan hoos yimaadaa Ministry of Justice and Public Security (Wasaaradda Caddaaladda iyo Ammaanka Guud). Inkasta oo ay Wasaaraddu Golaha ka hagto dhinacyada xeer-dejinta, habsami-socodka, miisaaniyadda iyo kala mudnaanta guud, waxaysan ka hagi karin dhinacyada fasiraadda sharciga, qiimeynta xaaladaha ama go’aan ka gaarista kiisaska gaarka ah. golaha racfaanka iyadoo racfaan qaatuhu maqan yahay, ama waxaa go’aanka gaari kara hoggaamiyaha golaha ka dib marka uu eego talooyinka xoghaynta qaanuunka, ama xoghaynta qaanuunka ayaa go’aanka qaadan karta. Hoggaamiyaha golaha ayaa ah qofka isagu go’aaminaya qaabka go’aan looga gaarayo kiis kasta oo golaha la hor keeno.Immigration Act (Sharciga Socdaalka), kiisaska aan shaki muuqda laga qabin waxaa go’aamin kara hoggaamiyaha golaha ama xoghaynta qaanuunka iyadoo aan guddiga racfaanku kiiska ka fariisan. Kiisaskaani waxay noqon karaan kuwa si fudud loo ogaan karo inay buuxiyeen shuruudo gaar ah oo sharciyada iyo xeerarka ku xusan. Kiisaska shakigoodu muuqdo, waxaa sida caadiga ah lagu go’aamiyaa fadhiga golaha. Racfaannada ay UNE wax ka qabato waxaa ka mid ah ilaalinta (magangelinta), socdaalka qoyska, oggolaanshaha dal-ku-joogista, masaafurinta iyo jinsiyad bixinta.
UNE waxaa ka hawlgala shaqaale ka badan saddex boqol iyo knoton, oo ilaa 30 ka mid ahi ay yihiin garsoorayaal sharciyeysan oo Golaha Hoggaamiya. Intaas waxaa dheer, ilaa 300 oo qof oo iyaguna markii loo baahdo si iskaa wax-u-qabso ah uga mid noqda xubnaha golaha racfaanka.
Siyaabo kala duwan ayuu golaha UNE go’aammadiisa ku gaaraa. Go’aanka waxaa lagu gaari karaa fadhiga golaha racfaanka iyadoo racfaan qaatuhu goob-joog yahay, ama fadhiga
Sida uu dhigayo
Fadhiyada golaha racfaanka badankoodu waxay dhacaan iyadoo racfaan qaatuhu uu goob-joog yahay. Hase yeeshee, fadhiyada golaha racfaanku way dhacaan iyadoo uusan racfaan qaatuhu goobta joogin. Tusaale ahaan, haddii racfaan qaataha iyo Waaxda Socdaalku (UDI) ay isla oggolaadaan arrimaha kiiska saldhigga u ah sida; in racfaan qaataha faahfaahintiisa tixgelin la siiyay ka hor inta aan kiiska UNE loo soo gudbin, markaas oo kale golaha racfaanka ayaa racfaan qaataha oo maqan fadhi yeelan kara oo go’aan gaari kara. Si kastase ha ahaatee, joogitaanka racfaan qaatuhu waa lama huraan, gaar ahaan marka uu gacan ka geysan karo faahfaahinta caddeymaha loo baahan yahay.
Fadhiga golaha waxaa ka qaybgala hoggaamiyaha golaha iyo labo xubnood oo golaha caadiga ah ka socda. Xoghaynta qaanuunka ee UNE ayaa kiisaska diyaarisa si golaha racfaanku ay wax uga qabtaan. Fadhiga ka hor ayaa hoggaamiyaha goluhu wuxuu dukumintiyada kiiska u gudbiyaa xubnaha kale ee golaha. Fadhiguna wuxuu noqdaa mid albaabbadu u xiran yihiin.
Fadhiga waxaa lagu bilaabaa faahfaahin gaaban oo kiiska laga bixiyo, is barasho ay is bartaan dadka goobta jooga iyo waano racfaan qaataha loo soo jeediyo. Muddada fadhigu socdo, racfaan qaatuhu wuxuu ka jawaabi doonaa weydiimo ka imaan doona golaha iyo qareenkooda (wakiilkooda). Wakiilka waxaa la siinayaa fursad uu kiiska ku soo gunaanado. Kiisaska ay golaha racfaanku eegaan waxaa go’aankooda lagu saleeyaa meesha ay codadku u bataan.
Wasaaradda, Dawladda ama maamulka UNEdu dib uma eegi karaan go’aammada laga gaaro kiisaska gaarka ah, hase yeeshee waxaa racfaan looga qaadan karaa iyadoo la marayo nidaamka caadiga ah ee garsoorka.
Wax ka beddelistii ugu dambeysay: 13.11.12